Al-Shabaab oo Dadka aan Islaamka ahayn Ku Amartay inay Si Deg-deg ah uga Baxaan Gobolka Waqooyi-Bari ee Kenya | Aftahan News
Al-Shabaab oo Dadka aan Islaamka ahayn Ku Amartay inay Si Deg-deg ah uga Baxaan Gobolka Waqooyi-Bari ee Kenya
Kenya(aftahannews):- Kooxda Al-Shabaab, ayaa ku amartay Dadka Masiixiyiintu inay ka baxaan saddex degmo oo kuyaalla gobolka Waqooyi-Bari ee dalka Kenya, si loogu oggolaado Muslimiinta maxalliga ah inay helaan dhammaan shaqooyinka.
AFTAHAYEENKA AL-SHABAAB CALI DHEERE
Sidaa waxa laga soo xigtay Hay’ad u ololeysa arrimaha dadka Christianka oo fadhigeedu yahay Maraykanka.
cajal maqalka oo socday 20 daqiiqo ayuu afhayeenka alshabab ku booriyay Soomaalida-Keenyaanka ah inay iska saaraan dhammaan dadka aan Muslimka aheyn haddii aysan kaligood iska bixin. Inta badan dadka ku nool saddexda degmo waa Soomaali, kuwaas oo kasoo jeeda gobolkaas waqooyi Bari.
Kenya waxay ku jirtaa kaalinta 44-aad marka laga hadlayo cadaadisyada Masiixiyiinta, sida lagu xusay Liis soo baxay 2020. Amarkan Al-Shabaab, ayaana cabsi ku abuuray Dad badan oo Museexiyiin ah oo ku nool gobolka Waqooyi-Bari ee dalkaas.